“Shaydaanka 82” Askarta Ugu Qatarsan Mareykanka ee Khaliijka La Geeyey | Xaqiiqonews
“Shaydaanka 82” Askarta Ugu Qatarsan Mareykanka ee Khaliijka La Geeyey
Bariga dhexe ayaa dhax dabaalanaya xaalad kacsanaan oo ka dhalatay xiisadda cusub ee Mareykanka iyo Iiraan, ka dib dilkii qaasim Suleymaani.
Mareykanka ayaa gacanka carabta u daabulay guutooyin ka tirsan ciidanka dalaayadaha ku booda ee loo yaqaan “Paratroops”, ka dib xiisadda Mareykanka iyo Iiraan ee ka dhalatay dilkii Suleymaani.
Warbaahinta Imaaraatka ayaa sheegtay in koox cusub oo ciidanka dalaayadaha ku booda kana tirsan kooxda 82’aad ee ciidanka cirka Mareykanka ay gaareen Khaliijka.
Ciidanka cusub ayaa loo badinayaa in ay xoojin doonaan ciidanka Mareykanka ee ku sugan gacanka carabta, ciidankani ayaa ka soo amba baxay xerada milatariga ee Fort Bragg ee gobolka north Carolina Mareykanka.
Kooxda 82 ayaa sidoo kale loogu naaneysaa “Balaayada cirka ka soo dhacday”, waxa kale dadka qaar ay ugu yeeraan “Sheydaanka 82”.
Kooxdani ayaa la aasaasay 1917-kii intii lagu guda jiray dagaalkii koowaad ee aduunka, waana koox lagu tababaray xagga cirka gaar aahan “dalaayadaha”, Mareykanka ayaana inta badan u isticmaala xaaladaha dag dag ah.